एकैदिन थपिए ८३ संक्रमित , काठमाडौं र भक्तपुरमा पनि भेटियो — नयाँ कुरा
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न भागमा मंगलबार एकैदिन ८३ जना कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहान ५७ र बेलुका २६ जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ पुष्टि गरेको हो। यससँगै संक्रमितको संख्या २ सय १७ पुगेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले दिउँसो प्रेस ब्रिफिङमा पर्साका ३९, रूपन्देहीका ९, कपिलवस्तुका ८ र बाराका १ जना संक्रमित रहेको बताएका थिए। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बेलुका जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार पर्साकै थप १८ जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै, महोत्तरी, धनुषा र भक्तपुरका २÷२, काठमाडौं र सर्लाहीका १÷१ जना संक्रमित छन्।
¥यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) र पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) विधिबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। स्वाब संकलन र परीक्षण दायरा विस्तार गरिएको छ। मुलुकका सातै प्रदेशमा रहेका ८ वटा प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ।
प्रवक्ता डा. देवकोटाका अनुसार ५९ हजार ६ सय २७ जनामा आरडीटी विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। पीसीआर विधिबाट १८ हजार ९ सय ६४ नमुना परीक्षण गरिएको उनले बताए। पछिल्लो पटक थप २ हजार २ सय ३६ वटा परीक्षण भएका छन्।
मुलुकभरका क्वारेन्टाइनमा १२ हजार ७ सय ८५ जना बसिरहेका छन्। आइसोलेसनमा रहेकाको संख्या २ सय २८ छ।
कोरोनाको भुंग्रोमा प्रदेश २
प्रदेश नम्बर २ कोरोना संक्रमणको भुंग्रोमा परेको छ। भारतबाट प्रवेश गरेका जमातीको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिबाट संक्रमण फैलिएको जनाइएको छ। प्रदेश २ का ८ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन्। बिहार राज्यका जिल्लासँग जोडिएको प्रदेश २ का पर्सा, महोत्तरी, बारा, रौतहट, धनुषा र सर्लाहीमा संक्रमित फेला परेका छन्। प्रदेश २ मा १ हजार ५ सय ३४ जना क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको प्रवक्ता डा. देवकोटाले बताए। ८० जना आइसोलेसनमा छन्।
यस्तै, प्रदेश नम्बर ५ का नागरिक कोरोनाको उच्च जोखिममा देखिएका छन्। भारतको मुम्बईबाट आएका व्यक्तिले संक्रमण बढाएको पाइएको छ। कपिलवस्तुमा स्थानीय प्रशासनले जिल्ला सिल गरेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएको कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका, बुद्धभूमि नगरपालिकामा नयाँ संक्रमित फेला परेका हुन्।
कपिलवस्तुपछि बाँकेको नेपालगन्जमा संक्रमित बढी देखिएका छन्। तेस्रोमा रुपन्देही जिल्ला प्रभावित भएको छ। बर्दियाको राजापुर–५ की ११ वर्षीया बालिकामा पनि संक्रमण देखिएको छ।
कपिलवस्तु र रूपन्देहीका संक्रमित बुटवलस्थित कोरोना अस्पतालमा उपचाररत छन्। बाँके र बर्दियाका संक्रमितको उपचार खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा भइरहेको छ। उक्त प्रदेशमा ५ हजार ४ सय ४२ जना क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको डा. देवकोटाले बताए। ९८ जना आइसोलेसनमा छन्।